Belgorod State University - Study in Russia. EducationBro Abroad
gaabinta : BSU
aasaasay : 1876
Ha iloobin in aad wada hadlaan Belgorod State University
Qorto Belgorod State University
Belgorod State University waxay ardayda oo dhan faa'iidooyinka jaamacadda casri ah: jawi shaqsi ah, talin shakhsi by Macalimiin ka go'an iyo qalabka casriga ah ee hoolasha cashar iyo shaybaarada. Tayada sare ee tababarka tacliinta ay culays badan ku waayo-aragnimo wax ku ool ah iyo applicability keentay in jagooyinka ugu sareeya ee dhammaan qiimeynta jaamacadda Ruush khuseeya.
Guryaha waxaa loo qabanqaabiyaa ardayda ajinebiga ah ee ardayda deggan. campus ee jaamacadda aannu la dhismayaasha casriga ah ay aagga cagaaran oo waxaa ku sugnaa meel u dhow xarunta magaalada iyo goobaha oo dhan waa masaafad socod.
Hawlgalka of Belgorod State University Research Qaranka waa in ay u xalliyaan masalooyin cilmi ee heerka caalamiga ah iyo kuwa qaranka iyo, dhis iskudhafka waxbarashada, cilmi, hawlaha bulshada iyo dhaqanka ee Jaamacadda, si ay u tababaraan shaqaalaha xirfadda leh xirfad tacliin heer sare awood u leh xaqiijinta tartan ee Russia iyo Belgorod gobolka on garoonka caalamiga ah ee dhaqaale, Dhawrista iyo horumarinta dhaxalka dhaqanka iyo moral oo ka mid ah dalka iyo gobolka.
24 kun oo arday ka 85 gobollada Russia;
In ka badan 2200 ardayda ajinebiga ah ka 79 dalalka;
15 Joint Waxbarashada Mashaariicda la jaamacadaha top of Europe, Asia-Pacific gobolka iyo USA;
Barnaamijyada shahaadada Bachelor iyo Master ee English;
In ka badan 140 heshiisyo iskaashi caalami;
11 Associates oo Members of Ruush Academy of Sciences,
In ka badan 1,200 Dhakhaatiirta iyo Musharaxiinta of Science,
7 Machadyada, 3 Caqlina, Medical College, 2 laamaha;
19 waaxyaha muhiimka ah iyo 102 -Waaxaha sub;
278 taqasusyo shati barnaamijyada degree Bachelor iyo Master ee;
14 Musharaxa iyo Golayaasha PhD;
50 tilmaamaha sayniska ee cilmi aasaasiga ah iyo codsatay
1 dugsiga Sayniska;
55 xarumaha cilmi-baarista iyo laboratories ;
3 xarumaha isticmaalka caadiga ah ee qalabka sayniska;
38 cilmi, xarumaha sayniska iyo waxbarashada;
6 xarumaha sayniska;
BSU tignoolojiga Cluster "High Technologies" la hagitaanada ganacsi;
26 barnaamijyada tababarka wadashada in 80 taqasusyo;
Ardayda’ Midowga isu geynta 19 ardayda’ ururada;
Xarunta Cultural Youth, oo ay ku jiraan 16 ardayda tahay kooxaha;
6 hoolalka reading,
5 miisaska bixinta,
1,2 Million. koob;
In ka badan 4000 kombiyuutarada (oo ay ku jiraan laamo iyo College Medical).
72 fasalo kombiyuutar (oo ay ku jiraan laamo iyo College Medical);
20 dhismayaasha waxbarasho ee;
6 la dejiyey;
Farmashiyaha ruqsad si ay u diyaariyaan daroogada xarunta;
Complex Museum (University ee History Museum, Buslhada Museum, Mineralogical Museum, N. Strakhov Library-Museum);
Xarunta Daryeelka Caafimaadka BelSU;
Institute of Waxbarasho
Kuliyada Waxbarashada Jirdhiska
Kuliyada Preschool, Waxbarashada aasaasiga ah iyo Gaarka ah ee
Kuliyada History iyo Philology
Kuliyadda Xisaabta iyo Science Waxbarashada
Kuliyada Luqadaha Dibadda
Kuliyada arrimaha caafimaadka iyo Pediatrics
The Institute of Cross dhaqan-Isgaarsiinta iyo Xiriirka Caalamiga ah
Diyaarinta Kulliyadda The
Institute of Dhaqaalaha
Institute of Engineering Technology iyo Science Dabiiciga ah
Kulliyadda Management Macdanta iyo khayraadka dabiiciga ah
Kuliyada Theology iyo Social Sciences
laanta Stary Oskol
Taariikhda our University waxa ay xidhiidh dhow la taariikhda waxbarashada barbaarinta ee Russia. The dib u habaynta ee 1860 dallacday ee xawaaraha-up of dhaqaalaha, ganacsiga iyo horumarka sayniska military oo keenay kororka ee goobaha waxbarashada. Tan iyo markii ay 1872 hay'adaha gaarka ah ee waxbarasho - machadyada waxbaridda - waxaa la aasaasay.
On September 26, 1876 magaalada degmada Belgorod Machadka Tababarka Macalimiinta ee – mid sagaalaad ee Russia – waxaa la aasaasay by amarka ka mid ah Wasaaradda Waxbarashada Dadweynaha. Tan iyo waqti in jidka adag laakiin xiiso leh of our University ayaa bilaabay.
On June 4, 1919 Machadka Tababarka Belgorod Macallimow ayaa habayn galay Belgorod koriska Institute by amarka Commissariat Dadka for Education of RSFSR ah, iyo in 1920 waxaa loo habayn galay Belgorod Institute of Education Dadweynaha.
In 1922 Belgorod Institute of Education Public waxaa habayn galay Belgorod la taaban karo Institute of Education Dadweynaha, kaas oo la reordered galay Dugsiga Sare ee koriska ee September, 1923.
In 1939 mar kale waxa ay noqotay Machadka Tababarka Macalimiinta ee.
In 1941, markii dagaalkii labaad ee dunida bilaabay, Machadka joojisay shaqada. In1944, marka duulay fashiistaha ayaa ka eryay dhulka USSR, Machadka dib u bilaabay hawsheeda magaalada Stary Oskol sida Belgorod ayaa la burburiyey intii dagaalka. Dagaalka ka dib Machadka si guul leh horumariyo ay waxqabad.
On June 21, 1954 Machadka Tababarka Macalimiinta ayaa waxaa ay dib u habayn galay Institute koriska ah.
In 1957 Institute waxaa loo qaaday si ay u Belgorod iyo meeleeyay dhismaha jidadka Kommunisticheskaya (maanta waa dhismaha ee Social-fiqi Kuliyada ah, 78 wadada Preobrazhenskaya).
In 1966 Machadka guurtay dhismaha cusub ee wadada Stydencheskaya.
In 1967 Belgorod State Institute koriska ayaa loo magacaabay ka dib markii М.S. Olminsky (Go'aanka Golaha Wasiirada ee RSFSR No.411 ee June 6, 1967, Qadarka oo ka mid ah Wasiirka Waxbarashada ee RSFSR No.142 ee June 29, 1967).
In 1994 Belgorod Institute koriska State magacaabay ka dib markii М.S. Olminsky waxaa magacooda loo baxshay sida Belgorod State University koriska magacaabay ka dib markii М.S. Olminsky (Qadarka Tacliinta Sare Golaha Qaranka ee ka mid ah No.1005 Federation Ruush of October 13, 1994 On bedelayaan ah ee waxbarashada sare).
In July, 1996 on salka Belgorod State Institute koriska magacaabay ka dib markii М.S. Olminsky ee Wasaaradda Waxbarashada ee Ruushka, Kuliyada Belgorod Territorial of Ruush Distance Learning Maaliyadda iyo Dhaqaalaha Institute of Higher Education Golaha Qaranka ee Ruushka iyo Belgorod Medical College of Maamulka Gobolka Belgorod, Belgorod State University of National Tacliinta Sare Council ee Ruushka ayaa waxaa la aasaasay, taas oo ah bedelka ka mid ah machadyada kor ku xusan (Digreetaddii Madaxwaynaha oo ka mid ah No.1030 Federation Ruush of July 12, 1996, Go'aanka Dowladda oo ka mid ah No.880 Federation Ruush of July 23, 1996, Qadarka Tacliinta Sare Golaha Qaranka ee ka mid ah No.1410 Federation Ruush of August 14, 1996).
Isbaddel Legal of Belgorod State University in Belgorod koriska Institute, asaasay 1876, waxaa lagu sheegay by Go'aan Gobolka Belgorod Xalinta Maxkamadda August 1, 2001 ee la xiriira in kiiska А08-2793 / 01-6.
On December 5, 2002 Belgorod State University ayaa lagu daray diiwaanka State Middoobey ee Hay'adaha Sharciga sida Waxbarashada Hay'adda State of Higher Education Professional Belgorod State University.
On January 17, 2005 Waxbarashada Hay'adda State of Higher Education Professional Belgorod State University ayaa lagu daray diiwaanka State Middoobey ee Hay'adaha Sharciga sida Waxbarashada Hay'adda State of Higher Education Professional "Belgorod State University".
In 2010 Jaamacadda Gobolka ("BelSU") ahayd hay'adda keliya ee waxbarasho ee gobolka Belgorod ah, iyo sidoo kale Degmada Dhexe ee Federaalka (marka laga reebo jaamacadaha magaalada caasimadda ah ee reer Russia), in lagu siiyo xaaladda "University Research Qaranka" (Qadarka Dowladda oo ka mid ah Federation Ruush No.812-r of May 20, 2010).
In 2011, ku saleysan beddelo nooca jirin ee Waxbarashada Hay'adda State of Higher Education Professional "Belgorod State University", ah Federaalka State Banaan Educational Institution of Higher Education Professional "Belgorod State National University Research"(Jaamacadda Research National "BelSU")waxaa la aasaasay (Qadarka ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Science ka mid ah No.129 Federation Ruush ah February 1, 2011).
Federation Ruush waa aasaase of University Research Qaranka "BelSU. Awoodaha iyo amarka aasaasihii Jaamacadda waxaa lagu dhaqmaa by Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ee Ruushka.
Ma rabtaa wada hadlaan Belgorod State University ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Belgorod State University rasmiga ah Facebook
dib u eegista Belgorod State University
Ku biir si ay ugala hadlaan of Belgorod State University.
University First State Pavlov Medical of St. Petersburg Saint Petersburg
Ruush University New Moscow